Maleeshiyaadka Cabdirashiid Janan ee ku sugan Mandera oo bilaa... | Universal Somali TV
Shacabka ku dhaqan Ismaamul deegaaneedka Mandera ee dhaca gobolka waqooyiga Bari ee dalka Kenya ayaa loogu baaqay in isku kaashaadaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen maleeshiyada uu wato wasiirka amniga Jubbaland ee ku dhaqan bariga Mandera.
Xildhibaanka Bariga Mandera Cumar Maxamed Macalin oo qadka taleefanka kula hadlay Universal Tv ayaa ku eedeeyay maleeshiyaadka Janan in ay bilaabeen in hubkooda ay ka iibiyaan shacabka magaalada waxaana uu ka digay cawaaqibka arintaan ay ku yeelan karto mustaqbalka amniga Ismaamulka Mandera.
Mr Cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa docda kale sheegay in uu bilaabi doono xafiiska hormarinta uu ku leeyahay bariga Mandera sidii uu la tashi ula sameyn lahaa bulshada taasi oo ku aadan wadiiqada kaliya ay iskaga saari karaan maleeshiyaadka Janan oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa Ismaamulka Mandera gaar ahaan aaga ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Cumar Sala ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidan aan Kenyaan aheyn in ay sii kuu sugnaadaan Mandera ay tahay wax qalad ah waxaana uu ku booriyay shacabka markale ay diyaar garow u galaan sidii la iskaga xoreyn Lahaayeen.
Cabdiraraashiid Janan oo sanadkii hore ka baxsaday xabsi ku yaal magaalada muqdisho ayaa bilaabay abaabul dagaal oo ka dhan ciidanka dowlada ee ku sugan degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Xukuumada Soomaaliya ayaa arintaan ku eedeysay dowlada Kenya in ay dabada ka riixeyso maadaama saldhigga uu ka soo duulayo uu ku yaal magaalada Mandera.
Kan-xigaXisbiga Wadajir oo Baaq u diray Guddi...
Kan-horeTuug danbi Naadir ah loogu maxkamadee...
57,055,004 unique visits